I-Studio ku-Camden Harbor - I-Airbnb
I-Studio ku-Camden Harbor
Camden, Maine, i-United States
U-Marianne Ungumbungazi ovelele
Itholakala emngceleni we-Camden Harbor 's Public Landing, enokubukeka okuhle kwechweba elingaphakathi lase-Camden kanye ne-Mt enhle. I-Battie, ihlezi ku-Studio e-Camden Harbor. Le ndawo yesibili, ifulethi le-studio elihlanzekile nelinethezekile linamafasitela anele nokukhanya kwemvelo okuningi futhi iyindawo ekahle kakhulu yokubuka ukuphuma kwelanga phezu kwe-Penobscot Bay. Ngompheme omkhulu wangasese, izivakashi zingakhululeka futhi zijabulele imisebenzi ejabulisayo yechweba njengoba ziphuza isiphuzo esiconsisa amathe noma zijabulele ukuphuma kwenye yezindawo zokudlela ezinhle zase-Camden.
Isitudiyo sinezindawo zokuhlala ezithokomele ezinomabonakude, umbhede omkhulu one-Comphy Brand ne-Cuddledown yezinto zombhede zase-Maine, ikhishi elisebenzayo nelinakho konke (ifriji elincane, i-toaster oven, i-microwave, ipuleti elishisayo, usinki omkhulu), negumbi lokugezela elisanda kulungiswa elineshawa enkulu yamathayili, usinki wezinyawo nendlu yangasese. Umpheme omkhulu, wangasese obheke i-Camden 's Public Landing enezihlalo ezinethezekile nokubukeka okuhle kwechweba elingaphakathi lase-Camden nezintaba eziseduze. Amasevisi ahlanganisa i-wi-fi, i-premium tv channel lineup, ukuhlinzekwa kokuqala kwezinto zokugeza nezinto zephepha, amathawula okugeza avela ku-Turkish towel Co., i-hairdryer, i-ayina nebhodi loku-ayina.
I-Studio sihlezi ngokoqobo enkabeni yedolobha. Zonke izitolo ezinhle kakhulu zase-Camden, indawo yokudlela, ama-boutique, amagalari, kanye nendawo enhle engasemanzini kumane nje kuyizinyathelo ezingu- ukusuka emnyango wakho wangaphambili. Ngakho-ke uma ujabulela ubumnandi bokwenziwayo, abantu babukele futhi bengakhathazeki ngomsindo omncane phakathi namahora okuhlwa, khona-ke le ndawo ngeyakho. Siyidolobhana elincane, elinohlonze elisogwini lase-Maine, umsindo wasebusuku awuvamile ukudlula ngo-10pm phakathi nezinyanga zasehlobo. Ungacindezeleka ukuthola noma iyiphi enye indawo yokuhlala edolobheni eliseduze ne-Camden Harbor kunesitudiyo sethu.
Izivakashi zizongena ehhotela lethu eliseduze, 16 Bay View, futhi zinikezwe okhiye neziqondiso zokupaka. Ukupaka kwamahhala ebusuku kufakiwe ekuhlaleni kwakho futhi kuthatha uhambo olufushane ukusuka ku-Studio. Uzonikezwa inombolo yocingo lwendawo yokwamukela izivakashi yehhotela yethu ukuze uthole isevisi yamakhasimende yamahora angu-24 nokulungisa noma izidingo eziphuthumayo.
Izivakashi zizongena ehhotela lethu eliseduze, 16 Bay View, futhi zinikezwe okhiye neziqondiso zokupaka. Ukupaka kwamahhala ebusuku kufakiwe ekuhlaleni kwakho futhi kuthatha uhambo…
UMarianne Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Camden namaphethelo